स्कूल पढ्ने विद्यार्थीसँग तीस विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट ! | Educationpati.com
स्कूल पढ्ने विद्यार्थीसँग तीस विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट !
२०७३ पुस २० गते ०१:००मा प्रकाशित
पोखरा । मदरल्याण्ड हाइस्कूल पोखरामा कक्षा १० अध्ययनरत सोजिता पहारीसँग विश्वका विभिन्न १३ वटा विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट छन् । उनी विदेश पढेर सर्टिफिकेट पाएकी भने होइनन् । उनले घरमै बसेर मोवाइल चलाएरै डिग्री हासिल गरेकी हुन् । पहिले मोवाइलमा फेसबुक चलाएर व्यस्त हुने सोजिता अचेल मोवाइल त चलाउँछिन् तर त्यसमा फेसबुक नभएर संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयका कोर्सहरु गर्छिन् ।
उनले इन्टरनेटबाट पढ्न र जाँच दिन सकिने मूक विधिमार्फत् मोवाइलबाटै विभिन्न विश्वविद्यालयका डिग्री हासिल गरेकी हुन् । पहिले फेसबुक धेरै चलायो भनेर गाली गर्ने उनका अभिभावक अहिले उनी मोवाइल चलाउनमा व्यस्त हुँदा खुसी हुने गरेका छन् । उनी भन्छिन् –‘पहिले धेरै मोवाइल नचला भनेर बुवाआमा गाली गर्नुहुन्थ्यो तर मोवाइल चलाएरै भित्ताभरी विदेशी विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेट झुण्ड्याउन थालेपछि उहाँहरु खुसी हुन थाल्नु
साधारण मोवाइल, कम्प्यूटरमा फेसबुक चलाउनेले फेसबुकको केही समय कटाएर घरमै बसेर विश्वविद्यालयको विद्यार्थी बन्न र डिग्री प्राप्त गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । उनीसँग जस्तै सोही विद्यालयमा ११ कक्षामा पढ्ने सोनिया गौतमसँग पनि ३० वटा विभिन्न विश्वविद्यालयका सर्टिफिकेटहरु भित्तामा सजिएका छन् । उनी पनि पढाइ पछिको खाली समयमा मोवाइलबाट विभिन्न विश्वविद्यालयका मूक कोर्ष गर्न व्यस्त हुन्छिन् । उनले मोवाइलबाटै ग्रामर, एस्से राइटिङ, इंलिस ल्यांग्वेज, साइन्सलगायतका विषयमा विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेकी छिन् । उनले मात्रै होइन, उनले मोवाइलबाटै विश्वविद्यालयको डिग्री हासिल गरेको थाहा पाएर उनका आफन्त र धेरै साथीहरुले समेत यस्ता कोर्सहरु पूरा गरेर सर्टिफिकेट प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
सोनिया भन्छिन्– ‘अमेरिका, जापान, युकेलगायतका विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुले अनलाइनमा विभिन्न कोर्षहरु राखिदिएका हुन्छन् । विश्वविद्यालयको नाम पनि सँगै हुन्छ । विश्वविद्यालय र विषय रोजेर मनपरेको कोर्ष मोवाइल, ल्यापटप र कम्प्यूटरबाट गर्न पाइन्छ ।’ एकै दिनमा पनि एउटा कोर्स पूरा गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । इन्टरनेटमा भिडियो, फोटोहरु हेर्दै रमाइलो गर्दै पढ्न र परीक्षा दिन मिल्ने सोनिका आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् । म हार्वड विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुँ मसँग त्यस विश्वविद्यालयको डिग्री छ भनेर गर्व लाग्ने उनी बताउँछिन् । ‘म विभिन्न तीसवटा विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुँ नेपालको मात्रै होइन्,’ उनी भन्छिन् ।
सोनिया र सोजिता मोवाइलबाट विभिन्न विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भई डिग्री मात्रै हासिल गरेका छैनन् । उनीहरु नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा पुगेर आफू जस्तै विद्यार्थीहरुलाई मूक कोर्सबाट कसरी पढ्ने, सिक्ने, भन्ने ट्रेनिङ गराउँदै हिँड्ने गरेका छन् ।आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट साभार